Chii chaungaona muMontevideo | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Montevideo, Chii chekuona
MuSouth America, muchikepe cheRío de la Plata, kune nyika diki inonzi Uruguay. Guta rayo guru iguta re Montevideo uye nhasi tichaenda kutsvaga nhoroondo yaro uye kuti ndeipi zvinokwezva vashanyi.
Saka padyo neBuenos Aires, guta guru reArgentina, vafambi vazhinji vanowanzoita nzira, "kuyambuka gungwa", sezvavanotaura kutenderera kuno kuRío de la Plata, imwe yenzizi dzakakura kwazvo pasi rese, kufema mweya wakadzikama chaiwo yeguta diki.
2 Chii chekushanyira muMontevideo
Guta guru reUruguay rakatumidzwa zita regomo riri padyo neiyo bay uye kune akati wandei vhezheni dzinotaura nezvekwakabva zita iri. Ivo vese vanobatanidza chiito kuti vaone nezwi gomo. Nhoroondo inotiudza izvozvo muhafu yekutanga yezana ramakore regumi nemasere vagari vekutanga vakasvika uye guta rakatanga kuvakwa. Pakupera kwezana ramakore rapfuura, maPutukezi vaive vatotanga, kwete kure kure, kure nemahombekombe eBuenos Aires, guta rinoyevedza rinonzi Colonia de Sacramento.
Saka muna 1723 maPutukezi akatanga Montevideo asi gore rakatevera vaSpanish vakavadzinga. Vakayambuka Río de la Plata kubva kuBuenos Aires nedzimwe mhuri dzemapiyona, vamwe vanobva muguta rino, vamwe vachisvika kubva kuCanary Islands, pamwe nemaIndia eGuarani nevatema vanobva kuAfrica.
Nhoroondo yeMontevideo neiyo yeUruguay kazhinji yakabatana nenhoroondo yeBuenos Aires neArgentina, asi padyo nemakoloni echiPutukezi eBrazil akange aine pesvedzero yavo. Gare gare, kurukwa nekubata kweEngland kwaisada chikepe cheRío de la Plata mumaoko eimwe nyika, nerubatsiro rwevapamusoro veBuenos Aires, vashoma kwazvo mubatanidzwa. Uruguay inova yakazvimiririra muna 1828.
Pashure pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX uye ruoko pamwe chete neiyo immigration maitiro emuvakidzani wayo Argentina, maEuropean mazhinji akatanga kusvika, kunyanya kubva kuItari neSpain. Mumakumi emakore ekutanga ezana ramakore makumi maviri, nharaunda dzeMontevideo nekusimudzirwa kwemaguta kwakatanga kuumbwa.
Chii chekushanyira muMontevideo
Montevideo iguta rekare saka kushanya kunotanga kubva ku ngowani yenhoroondo. Yaimbove nemasvingo ematombo nenhare. Chinhu chega chinosara musuwo, pakati pePeatonal Sarandí nePaza Independencia. Mukati meiyo nhoroondo nzvimbo iwe unowana zvivakwa zvekare kwazvo, mamiziyamu, maresitorendi akajeka, maresitorendi uye nzvimbo dzekutenga.
La Pedestrian Sarandí ndiko kuwana kweGuta Rekare, kubatanidza maviri akakosha echikamu chekare cheguta: kune rumwe rutivi iyo Plaza Independentencia uye kune imwe iyo Main Square, Old Plaza Mayor. Iyo inovhenekera yemuno yenzvimbo inofamba kubva panhamba 250 kuenda kunhamba 700. Pakaputswa masvingo emakore-zana, guta rakavhurwa uye nekudaro, Plaza Independencia, yakave chinongedzo pakati peGuta Rekare neGuta Nyowani.
Around iye pane iyo Salvo Palace, Etévez Palace, Executive Tower, Solía ​​Theatre uye Puerta de la Ciudadelku. Pakati pekwere pane chiyeuchidzo kuna José Gervasio Artigas, gamba renyika, pamwe nemausoleum ake. Izvo zvakakosha kusimbisa iyo Solís Theatre, kuvaka kubva muna 1856, iyo yakadzoreredzwa muna 2004 uye ine chitoro neresitorendi yakakurudzirwa.
Uye zvakare, kune nzendo dzinotungamirirwa neChina, Chishanu neMugovera pa11 na12, Unogona kuchengetedza kubva kune webhusaiti yeMontevideo. Kana zvisiri, uri wega, unogona kubva kubva Chipiri kusvika Svondo kubva 11am kusvika 18 pm Uye kana iwe uchida kuzviita kubva kumba kwako, unogona kushandisa Solis App kushanyira iyo theatre nenzira yehunyanzvi uye neyakawedzera chokwadi.
Dzimwe nzvimbo dzetsika dzekushanyira kuMontevideo ndidzo Yemazuva ano Art Space, Andes 197 Museum2, iyo Tsika Yenzvimbo Pamakumbo eRusvingo, the Hurumende House Museum, the Vilamajó Imba Museum, the Museum of Pre-Columbian uye Yemunharaunda Art, the Museum of Kurongedza Arts, iyo Fine Arts Museum, iyo Museum yeArt Nhoroondo, iyo Museum of Memory, iyo Migration Museum kana iyo Old Customs Museum.
Kana uchida Carnival Montevideo ine tsika yakakura uye iwe unogona kusvika pakuiziva iyo ku Carnival Museum. MaUruguayan anofarirawo nhabvu, saka unogona kushanyira iyo Nhabvu Museumndiro kana iyo Peñarol Museum, uye kudzidza nezve gaucho tsika kune iyo Gaucho Museum. Kune zvakare dzimba dzinoverengeka dzekare, kubva kukoloni, yakavhurwa semuseum, senge Garibaldi House, iyo Roma Museum kana iyo Rivera Imba.
El Salvo Palace Icho chimwe chivakwa chechiratidzo muMontevideo. Mazuva kubva 1928 uye yakavakwa nehama dzemachira. Iyo ine 27 pasi uye 105 metres kukwirira, saka yaimbove iyo refu kwazvo shongwe muLatin America kusvika 1935.
Montevideo iguta rinotarisana neRío de la Plata, saka kana ukaenda muzhizha kana chitubu, zano rakanaka ringave rekufamba mahombekombe ayo emarna machena uye nemvura yakachena. Iko kune promenade angangoita makumi matatu makiromita Inomhanya ichitevedza mahombekombe saka kufamba kukuru. Iwo akakosha mapoinzi pakufamba aya Chirangaridzo kuHolocaust yechiJuda, Escollera Sarandí, iyo Punta Cárdenas Lighthouse, iyo Montevideo Cartel, Plaza Virguilio uye Puertito de Buceo.
Kuti unakidzwe nezvakanaka panoramic maonero eMontevideo ipapo unofanira enda kuchikomo, nemamita ayo 135 kukwirira uye pamusoro peGeneral Fortress yeArtigas, iyo Panoramic maonero and the Telecommunications Shongwe kubva munharaunda yeAguada.
Husiku hunouya, ko zvakadii husiku husiku muMontevideo? Kune akanyanya echinyakare kune milongas uye makirabhu ekutamba tango, girazi reBuenos Aires iro rinogona kukwezva vashanyi.
Muzhizha iwe unogona kunakirwa yemitambo yezhizha, pasi pedenga rakavhurika, uye kana iwe uchida chikafu kune iyo Gastronomic Misika yeGuta Rekare, ine akasiyana siyana evhenji. Kune Mercado Agrícola de Montevideo, ine zvitoro zana, Sinergia Design, Ferrando Market, Siam Market neWilliam Market, kungodudza mashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Montevideo » Zvokuona muMontevideo
Chii chaungaona muSanto Domingo